Hordhaca Nintendo 64:
Nintendo 64 sidoo kale loo yaqaan N64 la magacaabay ay 64-yara unit processing dhexe, waxa la sii daayey ee 1996. Console waxaa loo yaqaan isticmaalka kaydadka sida qaab kaydinta hoose, Nintendo 64 ayaa waxaa ugu horayn bilaabay iyadoo seddex kulan oo waaweyn ee Super Mario 64 iyo pilotwings 64, caalamka oo dhan.
Console waa la sii daayey kala duwan oo kala duwan oo midabo iyo naqshado, waxaa jiray dhowr xukuma edition xadidan sii daayay.
235x224 si 640x480 flicker lacag la'aan ah oo isdhaafsan screen xal.
Hardware taabasho khariidadii (32x32 maps texture pixel)
Tri-quman sifeeyay khariidadii MIP
Correction Aragtidooda Guud (-bedelka taabasho khariidadii)
Processor: IPs R4300i, 93.75MHz, 64-yara, 24KB L1, 125 IPs, 250 MB / sec Bus
Graphics: SGI RCP, 62.5MHz, 100 MFLOPS, 150K geesoolayaashu / Sec, 32-yara Color, 500 MB / sec Bus
Sound: SGI RCP, 64 2D Voices, ADPCM, 500 MB / sec Bus
Xogta: 4MB (500 MB / s), kaydadka (32MB), Expansion 4MB RAM
SABABTA N64 HORUMARINTA EMULATOR:
Oo ay taageerayaan nidaamyada hawlgalka beegti iyo xaasidnimo EE N64:
Project 64 hore loo soo sameeyay sida tijaabo ah oo loogu talogalay horumarinta iyo zilmar jabo. Waxaa la arkaa in ay sida ugu fiican Nintendo 64 emulator. Waxaa sii daayay version 1.6 waxa la arkaa in ay emulator u xasilloon. Project 64 weli ciyaaro kulan ka fiican yahay inta badan emulators kale. P64 isticmaalaa ROMS kordhinta kala duwan, ROMS Kuwani ma la siiyaa barnaamijka sababo sharci Waxaan u malaynayaa, iyo horumarinta talin isticmaalka ROMS tuuray ka rasaasta kuu gaar ah.
Gameplay Fast ayna engine weyn
Taageero ciyaarta Wanaagsan
Naqshadeynta Great siman
Cayayaanka aad u yar
Just yar cayayaanka yar yar
Tani Nintendo 64 emulator lagu yaqaan in sharcigaasi waafaqsan sare, iyo waxqabadka filaayo in ay tahay il ah emulator furan
MUUJINTA IYO FUNCTIONALITIES
Qanisan naqshadeynta engine isticmaalo
Low taageero nidaamka dhamaadka
Taageero Wide u codes qiyaanoole
Naqshadeynta waa mid aad qaan
Taageero qiyaanoole Great
Taageerada ugu badan oo ka mid ah kulan N64
Mupen64 ++ waa emulator cajiib emulator furan yahay emulator ilo lacag la'aan ah oo ay taageerayaan OS badan waxay taageeri karaan fursado badan oo isagana ka jira kuwaas oo xiisaynaya in uu ciyaaro kulan N64 on nidaamka.
MUUJINTA IYO FUNCTIONALITIES:
Dhufto ee OS Multiple taageeraan Mupen64 ++
Waddaa inta badan ciyaaraha
Qaar ka mid ah kulamada aan taageeray
Ku jira cayayaanka mararka shilalka
UltraHLE loo arko inuu yahay guul Nintendo 64 emulator hore. Waxaa taageeray kala duwan oo ka mid ah kulan, hab loogu talagalay dega Khayaadka oo ahaa duwan emulators kale, halkii ay isku dayayaan in ay ku daydaan oo dhan ka kooban Console waxay isku dayo in la aqoonsado waxa ay ciyaarta ka dhab ahaan isku dayaya in ay gaaraan.
Khayaadka oo Heer Sare Ah
Ra'yiga xaasidnimo Great
Gacanta ku customizable
INI files xaddidaadda
Cayayaanka tiro yar
Waxaa la og yahay sida mid ka mid ah da'da weyn Nintendo 64 emulators in jiritaanka. Waxay u baahan tahay pc degdeg ah si uu ugu tartamo taas aawadeed dad badan ha u door bidaan laakiin waxaa hubaal ciyaari karaa naf dhibkeed kulan.
MUUJINTA iyo hawlaha:
La'aanta video kala carar la naqshadeynta default
Isticmaali karaa awood processor 100 boqolkiiba
Jir ah oo ay xaasidnimo jir
Graphics waa wanaagsan la kala carar ugu yaraan
Ciyaari karaa kulan online
Emulator aad u gaabis ah u baahan yahay pc si dhakhso
Kulan oo idil ma ay taageerayaan
Emulator Tani waxay ahayd un-doubtfully emulator ugu dhaqsiyaha badan Nintendo64 u ordi karo xawaare buuxa la taageero dhawaaqa buuxda oo ku saabsan nidaamka jir ah, laakiin waxa ay sidoo kale ma ahan wax sax ah ayaan leeyahay iin xaasidnimo yar uma uu oggolaan in aad u ciyaaro kulan oo dhan ku emulator this.
Khayaadka oo qaab filaayo in Fast u PC gaabis ah
Emulator sida dhaqsaha badan
Graphics waa wanaagsan
Taageerada kulan oo aad u yar
Badan oo cilladaha xaasidnimo
SupraHLE waxaa loo arkaa inay emulator ugu dhameystiran ee suuqa. Emulator ayaa abuuray sida version modified ee ULTRAHLE sidaa daraadeed waxa uu socon doonaa kulan dheeraad ah oo la Khayaadka oo wanaagsanaaday.
Taageero khiyaameeyaan daray
Ilaaliyaal dhexsocoto kala duwan
Qaabeynta xukuma soo hagaagaya
Waxaa loo baahan khayraad aad u yar
Dhiqlaha weli waxa ay joogaan
Daedalus waa emulator kale N64 iyo waxa ay taageertaa badan oo kulan ganacsi plugin sanqadha waa mid ka mid ah Azimer ee version.it waa il emulator u furan yahay labada daaqadaha iyo la qaadi karo si aad aad u gaarka ah Playstation.
Waxay leedahay versions labada daaqadaha PSP iyo
Taageerada tirada kulan oo caan ah
Waafaqsan Low u PSP
ULTRAHLE uu ahaa guul weyn ee technology xaasidnimo, play emulator tan ugu badan ee kulamada ganacsiga heerka jir aad u hufan.
Khayaadka oo Fast la farsamo HLE.
Play inta badan kulamada ganacsiga
Shilalka waa mid aad u yar
Joogo taageero Sound
Joogo taageero khiyaameeyaan
.Apollo Waa emulator kale ee ay Azimer. Waxa xiiso leh in ay la jaanqaadaan karo dhowr ROMS ganacsi waxa uu leeyahay gacanta ku dhawaaqa.
Isticmaala plugin for bandhigay iyo dhawaaqa
Isticmaalaa kheyraadka yar
Source code Open emulator laga heli karaa website-ka rasmiga ah
Aan si buuxda u deggan ayaa dhowr cayayaan
Joojiyo ka dib markii ay sii daayo hore
> Resource > Emulator > Nintendo 64 EULATORS